राजनिति बुझ्छौ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राजनिति बुझ्छौ ?
चुनावकै माहौल थियो । कुरापनि चुनावकै विषयलाई लिएर हुदैथियो । प्रश्न आएको थियो । राजनिति बुझछौ तिमी ?? मैले सोझै भनकी थिए अँ किन नबुझ्नु मजाले बुझ्छु । जवाफमा अलिकति अकमकाए म किनकि म कानुनको विद्यार्थी राजनिति बुझ्नै सक्दिनँ त कसरी भनुँ र ?फेरी कस्तो अचम्मराजनिति त जीवनँंगै जोडिएको हुन्छ । आफै राजनिनि गर्ने अनि थाहा छैन कसरी भन्न मिल्ला र ? राजनिति भन्दैमा नेता र पार्टी संग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि? यो त पाईँला पाईँला मै हामीसँग आवद्ध छ । आमालाई काममा सघाए जस्तो गर्नु अनि movie ticket को लागि पैसा माग्नु ???
कुरा सानो होला यो पनि एक खालको राजनिति नै हो । तिमी जति जे भन राजनितिबाट तिमी टाढा बस्नै सक्दैनौ के? म सोच्दै थिएँ अव पनि कसैले मलाई सोध्यो भने मलाईसवै थाहा छ भीन्दन्छु । धेरै विस्तृत जानकारी नहोला तै पनि नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र आएपछि अनगिन्ति सरकार परिर्वतन भैसक्यो । जुन कुरा म आफै जानकार छु । तर विडम्वना यति धेरैपटक फेरिएको सरकार र फेरिएको हरेक निति र नियम अनि परिवर्तन ? जनताले खोजेको परिर्वतन खोई त ? जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका यही उखान ठ्याक्क मिल्छ नेपालको सन्दर्भमा ।
यो विषयमा त मैले आफै सोचकै थिइन । जव सम्म म आफै सचेत थिइन कि राजनिति त म आफैले नि गरिरहेकि छु अनि बल्ल अन्तरमनले झकझकाउन थालेको थियो । साच्चै खोइ त ?हामीले सोचेको जस्तो देश । यति लामो अन्तराल अझै पनि परिर्वतनको नाममा सुन्यता ए साच्चै विकास नै भएनत कहां भन्न मिल्छ र ?
हो नि मेहिबाटाहरु बनेकैछन । विद्यालय पनि खुलेकै छन ।थोरै बिजुलीपनि बलेकै छ ।केही ठुला घरहरुपनि बनेकै छन । विकास भनेर यही बुझने हो भने त हो विकास भएकै रहेछ । फेरी पनि मनले मान्दे मान्दैन यी आधा,चौथाई काुरालई म परिर्वतनका संंज्ञा कसरी दिउ ? जहाँ पिटडिएका कैयो बालबालिकास्कुल देख्ने आसमा छन । जहा ं आफनै शहरका चेलीहरु बेचिएका छन । जहाँ देशकै लायक युवाहरु बेरोजगारीले अस्तव्यस्त छन् ।
जहाँ युवाहरुलाई आफनो जीवन सुन्दर बनाउन देशभन्दा बिदेश प्यारो लाग्न थालेको छ । जहाँ देशको आधा national income त remittence को सहाराले चलेको छ ।जहा हरेक दिन हत्याहिंसा र आतंकको खवर सुन्नमा आउछ । त्यहां म कुन कुरालाई लिएर बिकासको संज्ञा दिउ ।हो चुनाव त हुन्छ । मान्छेले भोट पनिहाल्छन । नयाँ लहर आउँछ । विभिन्न दलका नेताहरु आफनो झण्डा फहराउछन अवस्य कुनै एकपाटीले जित्छ । अनि त्यस पछि के ? फेरी उही होडबाजी । तिमी ठुलो कि म ठुलो ।
तिमीले पाउने कि मैलेपाउने । आज जसरी पार्टीहरुएक अर्को घरदैलो अभियानमा जुटिरहेका छन । आश्वासन बाढदै हिडिरहेका छन । के भोलिकादिनमा पनि यस्तै व्यबहार रहला ? के भोलीका दिनहरुमा पनि पार्टीहरुका विचमा यस्तो आत्मियता देख्न पाइएला आशा गरे पाइने छ । हामी यो पनि आशा गरौ कि,आजको दिनमा जसरी पार्टीका झण्डा फहराइरहेका छन्,त्यसरी नै भोलीका दिनमा नेपालको झण्डा फहराएको देख्न पाइयोस् । आज जसरी शिर्ष नेताहरु किचेर हिँडेका छन्, भोलिका लिनमा पनि यही आत्मियता देख्न पाइयोस्, जीत तिम्रो भयो या मेरो भयो होईन जित हाम्रो भयो भन्ने नारा होस् । देशले सफलताको सिढी चढोस् ।
जसरी एउटा भोटका लागि नेताहरुले यती धेरै मेहिनत गर्नुभएको छ नि हो भोली देश बनाउनका लागि पनि यस्तै कडा मेहिनत गरेको देख्नपाइयोस् किन किन कारात्मक हुनुभन्दा त सकारात्मक सोच राख्नु नै बेस । भोलिका दिनमा त्यो एउटा कुर्चिका लागि तानातान र विवाद होइन टुक्रिएको र भत्किएको देशलाई बनाउने विषयमा विवाद होस् । एउटा गहन जिम्मेवारी र दायित्वको बोध होस् । भत्किएका हाम्रा सम्पदाहरुको पुन निर्माण होस ।
विकास निर्माण केवल दुई दिनका लागि नभएर दिर्घायु होस् । किनकि हामी नेपालीहरु सकारात्मक छौ र सधै यही चाहान्छौ । उज्वल होस हाम्रो नेपाल । मेरो देश मलाई सधै प्यारो छ ।
यो कुरा लेख्नुको उद्येश्य यही थियो कि म सारा नेपालीको बिचार राख्न सकुँ । म पनि नेपाल आमाकी छोरी हुँ । एक आम नेपालीले जे सोच्छ मैले पनि त्यही सोचे ,त्यही लेखे । मलाई थाहा छ सारा नेपाली जनता यहीँ देख्न चाहान्छन् ,सुखी ,खुसी समृद्घ र विकसित नेपाल ।